Imaaraadka oo arrin Turkiga ka dhan ah Maraykanka u bandhigay & jac lagu dhejiyey! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Imaaraadka oo arrin Turkiga ka dhan ah Maraykanka u bandhigay & jac...
(Abuu Dabeey) 22 Sebt 2020 – Dhaxal-sugaha Abuu Dabeey, Mohamed Bin Zayed, ayaa wuxuu Pentagon u bandhigay soo jeedin ah inay saldhig cireedka ay ku leeyihiin Incirlik Air Base ee Turkey ay usoo raraan Imaaraadka, sida uu faafiyey New Khaleej.
The New Khaleej oo soo xigtey Tactical Report, oo ah warqaad faaqida arrimaha sirdoonka ayaa intaa raaciyey in Bin Zayed uu doonayo inuu danaha istaraatijiga ah ee Abuu Dabeey ka sara mariyo wax kasta oo kale, taasoo ay ku jirto xiriirka gaarka ah ee ka dhexeeya Bin Zayed iyo MW Maraykanka ee Donald Trump.
Warka MBZ ayaa xigey mid uu horay usii sheegay Senatarka midigta ah ee Maraykanka, Ron Johnso, kasoo u sheegay Washington Examiner in Maraykanku uu doonayo inuu usoo wareego gasiiradda Giriigga ah ee Crete si uu uga maarmo Incirlik.
“Maraykanku wuxuu tobannaan sanadood ku sugnaa saldhigga Incirlik Air Base oo ay u fasaxday Dowladda Turkigu, taasoo muujinaysa xiriirka xoogga ee ka dhexeeya Maraykanka iyo dalka aannu xulafada NATO nahay ee Turkey,” ayuu yiri Campbell.
Previous article”Ma jiro xad u dhexeeya Shiinaha & Taiwan!” – Shiinaha oo ka galaa baxaya hawada Taiwan jeer ay ku hanjabtey inaysan u habran doonin
Next article“Nin Yuhuud ah ayaa sanad qarinayey adiguna ma hal maalin ayaad magangelin waydey?” – Qiso dhab ah oo qiime badan